Fironana sy faminaniana momba ny fandaharan'izao tontolo izao 2016. Martech Zone
Fironana sy faminaniana momba ny fandaharana manerantany 2016
Alakamisy, Aprily 28, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Nanoratra momba ny inona izahay dokambarotra fandaharana dia tamin'ny faran'ny taona lasa ary nanao tafatafa tsara tamin'ny manam-pahaizana Pete Kluge avy amin'ny Adobe momba io lohahevitra io. Mandeha haingana ny indostria. Tsy azoko antoka fa haharitra ny rafitry ny fividianana doka nentim-paharazana izay mila fidirana an-tanana amin'ny fanatsarana. Raha ny marina dia antenaina ny fandaniam-bola amin'ny doka fandaharana 63% amin'ny tsena fampirantiana nomerika amin'ny faran'ity taona ity araka ny filazan'ny eMarketer.
Hitombo ny fampifangaroana ny doka teknolojia sy ny mar tech amin'ny taona 2016, miaraka amin'ny tsapan'ny mpivarotra APAC ny tombony amin'ny fikendrena mahomby kokoa hahatratra ny olona marina, miaraka amin'ny doka mety, amin'ny fotoana mety.
Azoko ampiana fa ireo rafitra ireo dia mikendry ihany koa ny toerana sahaza azy amin'ny fanentanana sahaza sy jeografika.
Rehefa mihalehibe ny tratra ary mitohy mihamitombo kokoa ny algorithma, ny fandrosoana fandaharana dia fandrosoana ankasitrahana. Ny fahafahan'ny mpivarotra mampitombo ny fahombiazan'ny ezaka ara-barotra fa tsy a famafazana ary mivavaha Hanampy ny indostria ny fomba fividianana doka marobe.
Ampidino ny Infografika
Tsy dia hanakana dokam-barotra ny mpanjifa raha mino izy ireo fa manan-danja aminy ny doka. Ary ny orinasa dia afaka mampihena ny vidin'ny vidiny isaky ny fahazoana vola, angamba ny fanovana ny tetibola ho amin'ny tsy fivadihana sy fihazonana. Tsindrio ny infographic raha hijery jiro boaty na sintomy avy eo MediaMath.
Tags: 2016statistikan'ny dokastatistikan'ny dokam-barotrafironana dokam-barotraapacasehoy ny statistikan'ny dokam-barotraemealatamMediaMathfaminaniana amin'ny programafironana fandaharanafamafazana ary mivavahany fironana
Eventbrite + Tees spring: Amidio T-Shirt Miaraka amin'ny Tickets-nao